Ukuhlola okulula nganoma iyiphi i-Platform ye-imeyili | Martech Zone
Ukuhlola okulula nganoma iyiphi i-Platform ye-imeyili
ULwesine, April 14, 2011 NgoMgqibelo, Okthoba 29, 2011 Douglas Karr
Ngibona izinkampani eziningi zilwa nezinhlolovo ze-imeyili. Abanye abahlinzeki be-imeyili bazamile ukushumeka amafomu kuzicelo zabo, kuphela ukuthola ukuthi amaklayenti amaningi e-imeyili (ku-inthanethi nangaphandle) ngeke anikeze inhlolovo ye-imeyili kahle. Ngeshwa, i-imeyili ivame ukuklanywa kahle uma ilingana namandla weklayenti elibi kakhulu le-imeyili.
Njengoba amaklayenti e-imeyili enikeza ithuba lokuchofoza kuzixhumanisi, indlela elula yokuthwebula i-poll elula noma inhlolovo nge-imeyili ukufaka izixhumanisi ezihlukile zempendulo ngayinye. Ngisanda kuthola i-imeyili yeNetflix eyenza lokho nje:
Kuhle futhi kulula. Akukho ukungena ngemvume okwakudingeka (isihlonzi sasifakwa kusixhumanisi futhi sadluliselwa ekhasini lokuya lapho elibala ucwaningo), akukho ukuchofoza isixhumanisi bese kuvulwa elinye ifomu, akukho datha yokungena…. ngokuchofoza nje. Lokho kuchofoza okunamandla! Angiqiniseki ukuthi kungani abathengisi abaningi (nabanikezeli bezinsizakalo ze-imeyili abaningi) bengasebenzisi le ndlela!
Ividiyo: Isifinyezo: I-BCC Ibhulogi Yakho?